सबै नेपालीले हेर्नुहोला ! सानै उमेरमा यी दाजुभाइले लाखौको ब्यापार गर्दै ! भाग्य न्यौपानेले दिए सहयोग -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
सबै नेपालीले हेर्नुहोला ! सानै उमेरमा यी दाजुभाइले लाखौको ब्यापार गर्दै ! भाग्य न्यौपानेले दिए सहयोग -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौं/ काम गर्ने हात र केहि गर्छु भन्ने जागर हुनेलाइ संसारको कुनै पनि कुनामा पुगेपनि बेरोजगार हुदैन। मेहेनत गर्न तयार हात र इमानदारीताका साथ् काम गर्ने मनलाइ सफलताले सधै पछ्याइरहेको हुन्छ।
सफलता पनि यस्तै व्यक्तिहरुलाई मिल्छ जसले आफ्नो ब्यबसाय सफल बनाउन रात दिन खटिन समेत हिच्किचाउदैन। यस्तै व्यक्तिहरुलाई सफलता मिलेको पनि धेरै उदाहरण हरु छन्। संघर्ष नै जिबन हो भन्ने जानेर यस्तै २ बालकहरुले आफ्नो कामकै कारण अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल हुदै गैरहेका छन्।
भर्खर मात्र १५ बर्ष पुगेका २ दाजुभाइले गरेको ब्यबसाय र परिश्रमको राम्रो तारिफ भैरहेको छ। उनीहरु हातमा हात राखेर काम छैन नेपालमा भन्ने हरुका लागि गतिलो उदाहरण बनेका छ्न। सानै उमेरमा पनि यी दाजुभाइ राजु र प्रबलले सबैको मन जितेका छन् ।
बालक हुदा देखिनै रामेछाप देखि भागेर काठमाडौ आएका उनीहरु अहिले मासिक लाखौ को कारोबार गर्छन त्यो पनि आफ्नै ब्यबसाय खोलेर। बाच्नका लागि संघर्ष गर्दै अघि बढिरहेका उनीहरु अहिले काठमान्डौ मा आफ्नै सानो होटल चलाएर लाखौको कारोबार गरिरहेका छन्।
उमेरका हिसाबले उनीहरुको ब्यबसाय ठुलो हो। आमाबाबुको काखमा बसेर फेसबुक र युत्युबमा झुनिरहेका उनीहरुकै उमेरका समुहलाइ उनीहरुको सफलताले गिज्याइरहेको भान हुन्छ। पढाइमा सफलता हासिल गर्न नसकेका उनीहरु आफ्नो पौरख कै कारण व्यवसायमा भने सफल बनिरहेका छन्। कुनै समल मन्त्रालय भित्रको क्यान्टिन मा समेत काम गरेका उनीहरुले अहिले आफ्नो होटलमा ग्राहकको मन जितिरहेका छन्।
काठमाडौं आए देखि विभिन्न होटल तथा क्यान्टिनमा सिकेको कुक कामलाइ अहिले उनीहरुले आफ्नो पेसा बनाएका छन्। फेसबुक मा खासै नाझुन्दिने उनीहरु काममै तल्लिन देखिन्छन । आफुले विभिन्न ठाउमा काम गरेको पैसा जम्मा गरेर करिब १ लाख ५० हजारको उनिह्हरुले अहिले आफ्नो होटलमा लगानी गरेका छन्।
Prevसाहसी पत्रकार भन्दै महराको विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकार अजयबाबुलाई यस्तो पुरस्कार दिइने घो’षणा…
Nextडलरको भाउ बढ्यो! आज पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस साउदी, कतार ,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ…
रंगशालाका निर्माणको लागि एक वृद्धाले दिइन सहयोग भन्दै यति ठूलो रकम , बिबरण सहित हेर्नुहोस
५ वर्षे छोराको क्यान्सर उपचार गर्न घरबार बेच्दा समेत नसकेपछि बुवाको यस्तो सहयोग अपिल (भिडियो सहित)
निरन्तर बढी’रहेको प्या’जको भाउ अरू महं’गियो कति पुग्यो त ? हेर्नुहोस्…